Iindaba - I-Flor Medical yenze ukubonakala okumangalisayo kwi-83th China International Medical Equipment Fair (CMEF)
Nge-Okthobha ye-19, i-2020, i-83th China International Medical Equipment Fair (CMEF) kunye ne-30th China International Medical Equipment Design kunye neMiboniso yeTekhnoloji yezeMveliso (i-ICMD) evulwe kakhulu kwiNgqungquthela yeSizwe yaseShanghai kunye neZiko leMiboniso. I-CMEF yaqala ngo-1979 kwaye yabanjwa ngempumelelo kwiiseshoni ezingama-82. Umxholo wale CMEF uthi "Itekhnoloji eNtsha ekhokela ikamva". Ukusuka kumthombo ukuya kwi-terminal, ukusuka kwisithethe ukuya kutshintsho, ukusuka e-China ukuya kwihlabathi, iibranti kuyo yonke le shishini zineengcinga zonyango. , In Vitro Diagnostics, Izixhobo zamathambo, i-Medical Electronics, i-Medical Optics, i-Rehabilitation kunye ne-Elderly Care, i-Smart Health, i-Mobile kunye ne-Telemedicine, i-Intanethi + yezoNyango kunye nezinye iimveliso zeenkwenkwezi ziya kuboniswa kulo mboniso.
UFlor Medical uyaqhubeka nokuzabalazela ukugqibelela. Ngamandla ayo e-R & D, yaphinda yazisa iimveliso ezintsha kwi-Expo yama-83 ye-China yeZonyango zeZonyango, kwakhona yaba yinto ephambili kolu shishino. Kulo mboniso, iFlor Medical yazisa iimveliso ezintsha zeFlorida yeglucose yegazi, uxinzelelo lwegazi, iatomization yeoksijini, iqondo lobushushu emzimbeni kunye nezinye iiprojekthi. Ukuqala kweemveliso ezintsha kutsala oosomashishini abaninzi baseTshayina nabangaphandle ukuba bayeke kwaye babukele kwaye babonisane kwaye bathethathethane. Abathengi abaninzi abanomdla bafikelele kwiinjongo zokusebenzisana kwindawo leyo.
Esi sisidlo seshishini, kodwa kukwayihambo lokuvuna. Kulo mboniso, ukongeza ekuziseni iimveliso ezintsha zeFlorida kubathengi bethu, sibuye nezinto ezininzi ezixabisekileyo ezivela kubasebenzisi bokugqibela kunye nabathengisi.
Uphuhliso oluqhubekayo lweFlor Medical kwicandelo lezixhobo zonyango lwasekhaya alunakwahlulwa yinkxaso nothando lwabathengi bethu. Kwixesha elizayo, iFlor Medical iya kuqhubeka ukubuya nomgangatho ophezulu, ukusebenza okuphezulu, ukusebenza ngokukuko, kunye nomgangatho ophezulu wokulandela imveliso kunye nokusebenza kwenkonzo. Abathengi, zama ukuba ngumthengisi onokuthenjwa wezixhobo zonyango lwasekhaya.